Bering Strait: hunhu, nzvimbo, dzidziso uye zvimwe | Network Meteorology
ChiGerman Portillo | 09/04/2021 11:18 | Kuparadzanisa
El Bering yakamanikana Icho chikamu chegungwa chinotambanuka pakati pekumabvazuva kwekupedzisira kwenzvimbo yeAsia uye kuchamhembe kwakadziva kumadokero kwakanyanya kwenzvimbo yeAmerica. Padivi renharaunda yeAsia, inosanganisira nyika dzakaita seSiberia neRussia, nepo kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweAmerica isu tine Alaska. Iyi strit yakashanda senzira yekutaurirana pakati peGungwa reBering kuchamhembe neGungwa reChukotka kumaodzanyemba. Iyo ine kukosha kwakanyanya kune iyo zano uye zvimwe zvido zvinofanirwa kuziva.
Naizvozvo, isu tichaisa iyi chinyorwa kukuudza iwe zvese zvaunoda kuti uzive nezveBering Strait uye maitiro ayo.
2 Bering Strait dzidziso
3 Biodiversity yeBering Strait
Iyo Bering Strait yakareba makiromita makumi masere nemasere uye inonyanya kugadzirwa nemvura inotonhora. Kuve padyo nenzvimbo yepamusoro-soro yekuchamhembe kwenyika tine tembiricha dzakaderera. Izvi zvinoreva kuti tembiricha yayo ichave yakaderera mukati megore rose. Iine avhareji kudzika kwemamita 30-50. Iro rakabhapatidzwa neiri zita mukuremekedza muDanish anotsvaga Vitus Bering.
Mukati meiyi nzvimbo yakaoma tinowana zviwi zviviri zvinozivikanwa seDiomedes Islands. Iyo yakakamurwa kuita vi Diomedes Minor uye Diomedes Greater. Yokutanga iri munharaunda yeNorth America nepo yechipiri iri munharaunda yeRussia. Zvitsuwa zviviri izvi zvinopfuudza mutsetse wepasi rose wekuchinja mutsara unopatsanura Strait mbiri Munhoroondo yese, marongero akasiyana akataurwa ekuvakwa kwebhiriji iro rinokwanisa kubatanidza mativi maviri eBering Strait. Saka, Unogona kubvumidza nzira yekutengesa pakati peAsia neAmerica. Iyi purojekiti yakasiyiwa nekuda kwekubudirira kweiyo transatlantic telegraph tambo.
Shure kwaizvozvo, yakasimbiswazve mugore ra2011 sechirongwa chekutengeserana pakati peUnited States, Russia neChina. iyo inogona kusanganisira makiromita mazana maviri pakadzika pasi pemvura. Nechekare nhasi ino nzvimbo yese yeBering Strait inzvimbo yakavharika yemauto. Iwe unogona kusvika kushanyira nemapasipoti akakodzera kubva kuhurumende yeRussia. Iko kune kazhinji kune akati wandei akasimba masimba pamusoro penzvimbo yese. Iwo chete madhorobha eRussia ari pedyo ndiwo maguta eAnadyr neProvéniya.
Bering Strait dzidziso
Iko kune akati wandei dzidziso uye kuziva nezve iyo Bering Strait. Uye ndezvekuti nyanzvi zhinji dzinosimbisa kuti dambudziko iri raigona kunge rakapa kukoloni muAmerica. Kune dzakawanda dzidziso pamusoro pekutama kwevanhu kubva kuAsia kuenda kuAmerica munguva dzekare. Mazhinji edzidziso idzi ane mhinduro inogona uye ndiyo Bering Strait. Iyo yakadzika mwero yemakungwa anokonzerwa nezera rechando kana nguva yechando ingadai yakafumura nzvimbo yakatambanuka yenyika iyo yaibatanidza makondinendi maviri. Saka, mamwe madzitateguru emunhu angadai akatama.
Ndiyo imwe yedzidziso pamusoro pekuwedzera kwemunhu kubva kuAsia ndima kuenda kuAmerican ndima. Iri bhiriji rechisikigo raizozivikanwa seBeringia Bridge. Dai dzidziso iyi yaive yechokwadi, zvinokwanisika kuti dambudziko iri raizopa kukoloni yevanhu mukondinendi yese yeAmerica uye, pamusoro pezvose, shanduko yakafanana nekuremekedza vazukuru vayo vekuEurope neAsia. Sezvo tembiricha yepasi rose yakawedzera zvakare, nzira iyi ingadai yakanyangarika ndokunyungudika mudenga. Nyanza yakanga yawedzera mwero wayo zvakare uye yakanga yakanyudzwa munzvimbo yepanyama pakati pemakondinendi. Nenzira iyi, vagari vekuAmerican vakasarudzika uye ipfungwa ichiri kutaurwa nanhasi nenyanzvi mumunda.
Aya ndiwo maitiro maAmerican aifanirwa kukura vakazvimiririra kubva kuEuropean nekuAsia.
Biodiversity yeBering Strait
Sezvatakambotaura, iyi strait iri muBering Sea. Iri igungwa rine marudzi mazhinji emhuka nezvirimwa. Yakave ichitariswa senge gungwa ecosystem ine kukosha kukuru. Nzvimbo dzese dzeArctic dzakatenderedza iyi strit dzinobatsirwa nekuvapo kwehupenyu hwakawanda. Izvi zvinodaro nekuti mvura yaro inogona kuwanikwa muhuwandu hwe zvipuka zvemumakungwa, mollusks, crustaceans, hove nedzimwe mhuka dzehukuru hwakanyanya.
Kune mhando dzinopfuura zana nemakumi matanhatu dzenzara dzinoyerera dzine hupenyu hwadzo muBering Sea. Semuenzaniso, isu tinowana hofori brown algae iyo inokwanisa kuumba masango akasvibira mune dzimwe nzvimbo dzemvura. Kune huwandu hunosvika mazana mana nemakumi mana emarudzi ehove ayo abatsira kuwanda kwekuredza uye bhizinesi naro. Nekudaro, pane zvimwe zvinokanganisa uye kutyisidzira kuri kukanganisa Gungwa reBering.
Iyo Bering Strait inokanganiswa zvakanyanya nehunhu hwevanhu, izvo zvinokonzeresa matambudziko pagungwa. Ino inzvimbo iri nyore kunetseka kumatambudziko ezvakatipoteredza uye nemhedzisiro yekudziya kwepasi. Saka panomuka dzidziso yeBering Strait yataurwa pamusoro. Kuve nzvimbo iri padyo neArctic Ocean inonyanya kunetseka sezvo iri kukanganiswa nekuwedzera kwemvura semhedzisiro yekunyungudika kwepolar ice cap.
Iyo Bering Strait inotamburawo nehurongwa hwekusvibisa nekuda kwezviitiko zvakasiyana zvekugadzira zvevanhu. Kubata hove kunotambura nekushandiswa uye matambudziko akakomba akonzerwa nemarudzi mazhinji. Semuenzaniso, nzvimbo yekumadokero ine mamiriro akakomba ehove yakanyanyisa uye hove zvisiri pamutemo.
Zvimwe zvikamu zvegungwa iri zvakasvibiswa neakawanda marara ehupenyu uye zvinhu zvine chepfu zvehukuru hukuru. Dambudziko nezvinhu izvi nderekuti zvakanyanya kuomarara kubvisa. Polychlorinated biphenyls, zvinoramba zvichisvibisa zvisikwa, zvisaririra zve mercury, lead, selenium, uye cadmium zvakawanikwa mumuviri wemhuka zhinji dzegungwa. Isu tinoonawo zvimwe zvinokanganisa zvinogadzirwa neyegungwa traffic iyo vanovhiringidza hupenyu hwemugungwa uye njodzi huru yekurasika kwemafuta.
Sezvauri kuona, iri dhivha rinobata zvido zvakawanda uye dzidziso dzinogona kusimbisa kuti munhu anogona kuwedzera nekuda kwekuvapo kwake. Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezveBering Strait uye maitiro ayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Network Meteorology » Meteorology » Kuparadzanisa » Bering yakamanikana